Psychology ny loko sy ny fampiharana azy amin'ny endrika sary sy dokambarotra | Famoronana an-tserasera
Psychology ny loko sy ny fampiharana azy amin'ny endrika sary sy dokam-barotra
Jorge Neira | | Palety miloko, dia midika hoe
Izay rehetra manodidina antsika dia feno loko, miaraka amin-tsika izy ireo na tsia mitaona anay, ohatra, amin'ny toe-tsaintsika ary avy any no misy ilay antsoina hoe psikôlika miloko ampiharina, manokana amin'ny varotra dokam-barotra sy ny asa audiovisual izay tena nilaina.
1 Inona ny psikolojia momba ny loko?
2 Loko sy ny fampiasany amin'ny doka
2.8 Volafotsy sy volamena
Inona ny psikolojia momba ny loko?
Momba izany siansa mamela ny fandalinana fandalinana, toy ny fitaomana, ny loko, ny fihetsika ary ny fahatsapana ny zanak'olombelona, ​​ary koa ny fihetsem-po azo avy amin'ireo fomba fijery ireo.
Avy amin'ity hevitra ity, mpanao dokambarotra sy mpamorona sary izy ireo dia mampiasa izay mariky ny loko tsirairay hahatratrarana ny tanjon'izy ireo amin'ny fametrahana ny vokatra amin'ny sehatra tadiavina sy hiantohana ny varotra.
Toy izao no misy ny loko tsirairay fampiasana manokana amin'ny sehatry ny doka, izany no antony rehefa mamolavola, ny loko dia ampiharina stratejika amin'ny taratasy sy mandritra ny fonosana (boaty, valopy, kitapo, sns.).
Loko sy ny fampiasany amin'ny doka
Ny daholobe dia mampifandray an'io loko io amin'ny hafanam-po, ny hafainganana ary izany no antony ahitantsika azy matetika ao amin'ny dokam-barotra amin'ny trano fisakafoanana haingana, ny ankamaroan'ny mpihaino dia ankizy sy tanora, ankoatry ny fanatrehany ireo vokatra amidy na entana lafo vidy izay misy ny hafatra manambara ny varotra haingana.
Ny psikolojia momba ny loko dia mifandraika amin'ny faharanitan-tsaina sy ny famoronana ary koa ny fahatezerana sy ny fialonana, noho izany ny fampiasana azy dia tsy maintsy voalanjalanja mba hialana amin'ny voka-dratsy.
Raha mikendry ampahany tanora ny vokatra dia ampiasaina ny loko manga sy ny feo mamirapiratra, raha toa ka kendren'ny mpanatrika be pitsiny kokoa sy mahonon-tena izy ireo, dia mety ny maizina sy miloko manga tsy mazava.
Ny loko dia mifandray amin'ny fahatsapana lalina, mahonon-tena ary mamindra tony sy mangina, na dia ampiasaina be loatra aza, ny vokany dia mety hahakivy.
Ampiasaina hampahafantarana azy io vokatra mitondra tombony amin'ny ain'ny olona, ny fiadanam-po sy ny fiononana, toy ny kojakojan-tokantrano, sakafo vita amin'ny ronono, tavy ambany, vokatra zaza, amin'ny fanadiovana ao an-trano sns. Ny tanjona dia ny hampitana ny tsy fananan-tsiny, filaminana milamina tanteraka, ny madio, iray manontolo ary miankina amin'ny fomba fampiasana azy io dia afaka manome effets banga.
Amin'ny dokambarotra dia mahazatra azy io izay vokatra tianao haseho ho rendrarendra, kalitao, kanto, be pitsiny ary mampiasa ny endrika metaly nomen'ity loko ity izay manahaka ny hatsiakan'ny vy. Ity loko ity dia teraka tamin'ny firaisan'ny mainty sy fotsy ary maneho ny fifangaroan'ny fihetseham-po sy fihetsika mifanipaka, ohatra, ny fifaliana amin'ny alahelo.
Izy io no loko mety indrindra ho an'ny vokatra izay ny be antitra no tsena kendreny, manome ny kalitao sy ny vidiny antonony izany. Izy io dia mifandraika amin'ny fahatoniana, amin'ny fararano ary amin'ny fandehan'ny fotoana.
Color nahagaga fa fantatra amin'ny tanora, dia ampiasaina hampiroborobo ny vokatra amidy sy hampiroborobo sasany. Izy io dia mifandray amin'ny fotoana mafana, miaraka amin'ny hafaliana, hafanam-po izay tsy maintsy ampiasaina amin'ny mizana.
Ny fampiasana azy dia tsy maintsy karakaraina tsara ary tsy misy fihoaram-pefy, saingy mety hanehoana ny fomba, ny hakantony ary ny fahononan-tenaRaha lafo ny entana dia ity no loko voatondro.
Volafotsy sy volamena
Izy ireo koa dia ampiasaina amin'ny vokatra lafo vidy, ranomanitra, akanjo sy ny hafa, manombana ny vidiny sy ny satan'izy ireo. Ireo alokaloka ireo manome soso-kevitra amin'ny harena amin'ny fomba lehibe ary izany no antony ampiasana azy ireo amin'ny fahombiazana lehibe.
Ny mpihaino kendrena aminy dia tena mifantina sy mitaky amin'ny kalitao sy ny lazan'ny marika, amin'ny ankapobeny ny olon-dehibe, fa ampiasaina amin'ny vokatra sasany ho an'ny ankizy sy ny tanora ihany koa. Ny loko dia mifandraika amin'ny fahatanterahana, miaraka amin'ny ara-panahy.
Izy io dia ampiasaina amin'ny vokatra tianao hahasarika ny saina, amin'ny tolotra, famonoana, varotra varotra sns. miloko amin'ny tanjaka sy tanjaka be Ampirisihina tsy hampiasa tafahoatra.
Io no loko mety aminy manao dokam-barotra momba ny vokatra mifandraika amin'ny natiora, miaraka amin'ny freshness toy ny legioma. Ny loko dia mifandray amin'ny natiora, miaraka amin'ny fanantenana sy ny filaminana.
Ho antsika izay manao doka amin'ny ambaratonga kely dia mahaliana ny mahatakatra izany ny psikolojia momba ny loko sy ny fampiasana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Psychology ny loko sy ny fampiharana azy amin'ny endrika sary sy dokam-barotra
francisca langarica villanueva dia hoy izy:
Tena tiako ny famolavolana sary
Valio amin'i francisca langarica villanueva
Ahoana ny fomba hiarovana ny fananana ara-tsaina amin'ny Internet
Patreon-crowdfunding, fomba iray hahazoana fivelomana